နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ ငှက်သွင်ပျံကြွမတတ်သောဝ်…… ….(ရှေးကဗျာများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ ငှက်သွင်ပျံကြွမတတ်သောဝ်…… ….(ရှေးကဗျာများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း)
နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ ငှက်သွင်ပျံကြွမတတ်သောဝ်…… ….(ရှေးကဗျာများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 22, 2011 in Poetry | 21 comments
အင်းဝခေတ်လောက်မှာ ” န၀ဒေး” ဆိုတဲ့စာဆိုစစ်သည်နောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲနောက်မှာ ရတုဘုရင်ရယ်လို့
သူ့ကို အနုပညာနယ်ပယ်က” ရတုဘုရင်”လို့လဲ အမည်ပေးထားကြပါတယ်။
သူရေးဖွဲ့ ခဲ့တဲ့ ရတုပေါင်းမြောက်မြားစွာကတော့ အလွမ်းဘက်နွယ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အမြဲလိုလို နယ်မြေလုပွဲစစ်ပွဲတွေကို ဆင်နွဲနေကြရတော့ သူတို့ရေးဖွဲ့တဲ့
စာတွေကလဲ စစ်အရိပ်အငွေ့တွေနဲ့ ရက်ယှယ်ထားတဲ့ အလွမ်း တွေနဲ့ဝေနေပါတယ်။
နတ်ရှင်နောင် ကတော့ စာပေကဗျာဘက်မှာ နာမည်ကောင်းနဲ့ကျော်ကြားပေမယ့် သူ့ရဲ့လူမူ့ရေးဘ၀မှာတော့ သေရည်သေရက်နွံမှာနစ်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်
ပေါ်တီဂီလူမျုိး ဒီဘရစ်တို(ခ)ငဇင်ကာနဲ့ပေါင်းဖက်မိတဲ့အတွက် သမိုင်းစာမျက်နှာထက်မှာ နာမည်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါက တော့ သူ့ရဲ့လူမူ့ဘ၀ပါ။
အနုပညာစံနဲ့တိုင်းတာရင်တော့ အလွန်တရာမှလှပသော စာလုံးများ နဲ့ရေးဖွဲ့ထားပြီ ရွတ်ဆို၍ကောင်းသော
အသံသာသော ရတုများရဲ့ မွေးသဖခင်အဖြစ် စံထားစရာ အမွေအနှစ်တွေလေးစားစရာအဖြစ်ချန်ထားရစ်သူပါ။
ကျွန်တော် အနီးမှာရှိတဲ့ ဆရာမြကေတု ပြုစုထားတဲ့ ကဗျာ့ယဉ်စာယဉ်လက်ရွေးစင်မှာပါတဲ့ နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နည်းနည်းတော့ ကြားဘူးတယ် ဆိုတဲ့ အားလုံးမဖတ်ဘူးသူများအတွက်ရယ်
လုံးဝကိုမဖတ်ဘူးသူများအတွက်ရယ် ရည်ရွယ်လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ပေါ်နွေလလျှင် တောင်ကခြိမ့်မြူး မင်းလွင်ဦးနှင့်၊
စိမ်းဝါ မိုးပန်း ထွေထွေစွန်းက၊
အလှယ်လှယ်တိ စပယ်ဖြူမွှေး စကားသေးကို၊
ဖျော်ဖြေမှလျှင် ယုယသံချို ၊
ချီသွား မူးမူး ရှေ့ရက်ဦးက၊
ပြေမည်မျှဝေး ချစ်ဝန်လေးခဲ့ ၊
ဒီကဗျာလေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
တပေါင်းတန်ခူး မိုးသားကျူးဆိုတဲ့ အချိန်လေးမှာ ပါတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုက
လျှပ်ပြက်လိုက်မိုးချိန်းလိုက်နဲ့ ရှိနေချိန်မှာ ချစ်သူထံပါးကို ငှက်ကလေးအသွင်ပြောင်းလို့ရောက်သွားချင်ကြောင်း၊
အချိန်ကာလအလျှောက်ပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်း စံပယ်ပန်း မြတ်လေးပန်းတွေကို
ချစ်သူကို ကိုယ်တိုင်ပန်ဆင်ပေးချင်ပေမယ့်လဲ တိုင်းရေးပြည်ရေးကြောင့်ဝေးနေချိန်မှာ
ချစ်သူလဲ လွမ်းနေမယ်ဆိုတာကို ဖွဲ့ဆိုထားတာပါ၊
ဒီကဗျာလေးကို အခြေပြုလို့ မန်းလေးက ဆရာမြို့မငြိမ်းက “နတ်ရှင်နောင်”ဆိုတဲ့အမည်နဲ့
သီချင်းရေးစပ်လို့ အဆိုတော်ကြီး “ပြည်လှဖေ”ကသီဆိုရာမှာ
ဒီရတုရဲ့ ပထမအပိုဒ်ကို မူရင်းအတိုင်းသီဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာသီချင်းလောက မှာ ပုံစံအသစ်နဲ့တီထွင်စပ်ဆိုသူ
ဂီတနက်သန် ကိုစောညိမ်းကလည်း နတ်ရှင်နောင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့သီချင်းကို
နတ်ရှင်နောင်ရဲ့စာသားတွေကို အသုံးပြုလို့ “နွေနှောင်းရက်ကျန်”ဆိုတဲ့သီချင်းစပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို အဲဒီတုန်းက ဆရာဦးသုခ သီဆိုတယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။
အစောပိုင်းတွေမှာ ဒီသီချင်း ကိုစောညိမ်းရဲ့သီချင်းလို့ သိထားကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီ နွေနှောင်းရက်ကျန်သီချင်း စာသားကို ဒဂုန်တာရာကရေးတယ် ကိုစောညိမ်းကသံစဉ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့ အစလေးထွက်လာပေမယ့် ခက်တာက အခုချိန်ထိ အဖြေမသိသေး မရေရာသေးတဲ့ကိစ္စလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဆရာဒဂုန်တာရာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်း ဒီကိစ္စလေး အဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
မလ္လာရနံ့ မွှေးပျံ့ ကြိုင်ရွှင်း၊
မြရည်ကြောစိမ်း လဲ့လဲ့ရှိန်းမြ၊
ရည်လျှပ် ဆံကျင် မျှမဆင်လည်း၊
ဒီကဗျာလေးမှာ ပါတဲ့စာသားတွေကိုဖတ်ရင် ရှေးက မိန်းမသားတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုပါ
တင့်လှပေဟန် ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်တောင် ရိုက်သေးတယ်လေ။ စာလုံးလေးတွေက အရမ်းနုရွနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်မှာတော့ ကဗျာကို ဘာသာပြန်ပေးဖို့ လိုလာပြီထင်တယ်။ ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူး။
ယုံသော်ရှိ မယုံသော်ရှိ …
နတ်သျှင်နောင် အခုထိ မကျွတ်သေးပဲ သန်လျင်မှာ ရှိနေတယ်တဲ့ …
ဝေမမ သတင်းမှန်မမှန် တညင်သားကို အတည်ပြုခိုင်းရမယ်။
မမ ရေ ကဗျာကိုတော့ ဘာသာမပြန်ပါရစေနဲ့ စကားလုံး အယူအဆမတူတာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
တညင်သား ကို အတည်ပြုခိုင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ သတင်းက ဆူး သယ်လာတာ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ရဟန္တာသိမ်ကို သွားလည်ခဲ့ဖူးတယ် သိမ်ဘေးမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကို ဘုန်းကြီး တပါးနဲ့ အတူ ရောက်သွားတာပါ။ အဲဒီ ကျောင်း အရမ်း သရဲခြောက်ပြီး ကြမ်းတယ်လို့ နာမည်ကြီးတာလည်း ကြားဖူးထားတော့ ထိုကျောင်းကိုရောက်တော့ စပ်စုချင်စိတ်နဲ့ ဟိုမေး ဒီမေး မေးတော့.. ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် က ပြောပြတာပါ။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်က အသက် ၆၀ ၀န်းကျင် ရှိမယ်။ ထိုနေ့က ရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်း တခုရှိနေတာ တွေ့မိတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ပုံစံက ရှေးသိပ်ကျလွန်းတဲ့ အတွက် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်း လုပ်ဖို့ အကူအညီ တောင်းလို့ ခဏခဏ ရိုက်ကွင်း လုပ်တယ်လို့ ကြားမိတယ် ရိုက်နေတာလည်း မြင်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးကို မေးတော့ သိမ်ထဲမှာတင် ခြောက်တာ မဟုတ်ဘူး ဦးဇင်း ကျောင်းလည်း ခြောက်တယ်တဲ့.. မျက်မြင်အနေနဲ့ ကျောင်းပုံစံ ပြောရရင်တော့ လှေကားကလည်း ရှေးပုံစံမျိုးနဲ့ ကျောင်း အပေါ်မှာလည်း သစ်သား ပန်းပုတွေ ထွင်းထားတဲ့ ဘီဒိုတွေ မှန်တင်ခုံတွေ သေတ္တာတွေ ရှိတယ် ကျောင်းကလည်း သစ်သားကျောင်း.. ပြောသာ ပြောတာ လမ်းလျှောက်ရင် ကျောင်းက ကြမ်းခင်းထားတော့ လှုပ်နေသလိုပဲ.. စသဖြင့်ပေါ့.. ဘုန်းကြီး ဆက်ပြောတာကတော့.. ညည ဆို ဒီနေရာ (ဧည့်ခန်းလို နေရာ) မှာ ဘယ်သူမှ မအိပ်ရဲဘူး။ တနေ့တော့ ဦးဇင်း ဆီးသွားချင်လို့ ထ ပြီး ဖြတ်သွားတော့ လူတယောက် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် လျောက်နေတာ တွေ့လို့.. ဟေ့ ဘယ်သူလဲ လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ သူက လက်အုပ်လေး ချီပြီး နတ်ရှင်နောင်ပါတဲ့.. ဟေ ဆိုပြီး အံသြသွားတော့.. သူ ဒီမှာ ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး ပြောတယ်။ ဦးဇင်း လည်း မယုံ တ၀က်နဲ့ ပေါက်ကရ မပြောနဲ့ လို့ ပြောလိုက်တယ် ပြောသာ ပြောရတယ် သူဝတ်ထားတာ နန်းဝတ် နန်းစားလိုလို နဲ့ စမတ်တော့ကျတယ် ဒီခေတ်လူတွေ ၀တ်တဲ့ အ၀တ်အစားမဟုတ်ဘူး။ လက်အုပ်ချီပြီး ပြန်ပြောတယ်.. ဒီကျွှန်းသေတ္တာကြီးထဲမှာ အရိုးထုတ် ရှိနေလို့ ဒီရောက်နေတာပါ ပြောတယ် ပြီးတော့ ပျောက်သွားတာနဲ့ ဦးဇင်းလည်း စိတ်ထဲမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ် နောက်တော့ အခန်းပြန်အိပ်လိုက်တယ်။ မနက်လင်းတော့ ကျောင်းက ကလေးတွေ ခေါ်ပြီး လက်ညိုးထိုးတဲ့ ကျွန်းသေတ္တာကြီး ကို ဖွကြတယ်။ အဲဒီ သေတ္တာကြီးက ဦးဇင်း ဒီကျောင်းမရောက်ခင်ကတည်းက ရှိနေတာ တခါမှလည်း ဘယ်သူမှ မဖွင့်ကြဘူး လေးလည်း အရမ်းလေးတော့ ဘယ်သူမှ မထိကြဘူး။ ရှာလိုက်တော့ တကယ်တွေ့တယ် ဒီတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး သေတ္တာထဲက ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လိုက်တော့ အတွင်းမှာ အံဝှက်လိုလို တခုတွေ့တော့ ဆွဲမ လိုက်တာ အနီရောင် ပိတ်စနဲ့ ထုတ်ထားတာ တော်တော်ဆွေးနေပြီ.. ဒါနဲ့ ဦးဇင်းလည်း ဟိုးက ခြံထောင့်မှာ (လက်ညိုးညွန်ပြတယ်) မြုပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်နေ့တွေတော့ လမ်းလျှောက်တဲ့ အသံမကြားတော့ဘူး။ သူပြောသလို အရိုးနဲ့ တူတဲ့ အပိုင်း အစအနလေးတွေတော့ အများကြီး တွေ့တယ်။ အရိုးခေါင်းတို့ လိုမျိုးတော့ အကြီးကြီး မဟုတ်ဘူး။
လူမှားပြီး အတည်ပြုခိုင်းမိတာကိုေ တာင်းပန်ပါကြောင်း။
ဓါတုကလျာ ကိုတော. ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတာဆရာ.၊ RC3 မှာ ကျောင်းတက် တုန်းက
toyota corolla အဖြူ လေးစီးတယ် Chemistry majour မှာ ကွင်းပေါ့။ရေစက်ဆုံ တော့ ကျောင်းနား မှာ ကားပျက် နေလို့ အားကြိုးမာန်တက် တွန်းပေးဘူးတယ်၊ အံမယ် သူက ပူတကေ စကားနဲ. thank you တဲ.၊ ရင်ထဲ ကုလားဘုရားလှည်.သွားတယ်။
ဓာတုက ကလျာက အဘဆွေရဲ့ မယ်မင်းကြီးမ မဟုတ်ဘူးလား ??
အဘဆွေကို မြင်လိုက်တာနဲ့ တွဲလျက် သတိရသွားလို့ပါ
ပျဉ်းမငုတ်တို ဇာတ်လမ်းထဲက သီချင်းရော နတ်သျှင်နောင် ရေးတာလားမသိဘူး..သိရင်ပြောပြပါအုံး…..
နတ်သျှင်နောင် ကျွတ်မကျွတ်တော့ မသိဘူး …တညင်သားက လုံးဝမကျွတ်ဘူး ..တေချာဒယ်
နတ်သျှင်နောင်ကို.. သံလျင်မြို့လယ်မှာ.. တံကျင်လျှိုသတ်လိုက်တာပဲ..။
စအိုကနေ ပါးစပ်ကထွက်တဲ့အထိ သံချောင်းနဲ့ထိုးသတ်တာကို ပြောတာ..။
ငဇင်ကာနဲ့ ပေါင်း.. ကိုးကွယ်ရာဘာသာပါပြောင်းလိုက်လို့တဲ့…။ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်ဆိုပြီး… တော့ပေါ့..။
တချို့စာအုပ်တွေကတော့.. ကားစင်တင်မီးရှို့ တယ်ရေးတယ်..။
၈၈ ၀န်းကျင်က.. နတ်သျှင်နောင်ရတုတွေကို.. စာပေစိစစ်ေ၇းက.. အမျိုးသားသစ္စာဖောက်စာဆိုပြီး..ပယ်တယ်မှတ်မိတယ်..။
နတ်ရှင်နောင်က မင်းညီမင်းသားဖြစ်လို့ ကားစင်တင် အသတ်မခံရဘူးနဲ့တူဒယ်။ မှတ်မိသလောက်တော့ ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဒီဘရစ်တို ကိုပဲကားစင်တင်သတ်တယ်။ သူကလည်း မခေဘူးနော်၊ အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးတာ မယူလို့ ဒီလို ရက်ရက်စက်စက် အလုပ်ခံရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဥကြောင် ကို တံကျင်လျှို လိုက်ရင်တော့ ကြောင်သားဘာဘီကျူး ဘဲ
မဆာလာ နိုင်နိုင် သုတ်မှ ဖြစ်မယ်။ မဆလာ မပါရင် နံ မှာ စိုးရတယ်။
အဲဒါကို ထန်းရည်နဲ့မြည်းရင်တော့ နော နော် ဘဲ
“ မောင်ပေ့ ရဲ့ အမြည်းလက်ဆောင် ကောင်းကောင်းလေး ” ဘဲ
မောင်ပေ ကောင်းကောင်းလေးဘဲက မကောင်းဘူး။
သတိရမိပါသေးတယ်။ ပန်းသတ်ဆိုတာ က အိပ်ယာမှာပန်းကိုခင်းပြီး
ရှားသလောက်ပဲ။ အညာရွာမှာညာတာဝါတာမရှိ အချစ်ကြီးချစ်တတ်ပေမယ့်
ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေမရှိ …..ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ အကွက်ချောင်းသူမရှိ
အရင်ရှေးခေတ်က စာဆိုတွေရဲ့စကားလုံးဖွဲ့နွဲ့ပုံက လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ တစ်ချို့တွေက စကားလုံးဆပ်ကပ်ပြနေတာများပါတယ်။
လေးပေါက်ကြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ထပ်ဖော်ထုတ်ပါအုန်း။
ဒီမှာ အပိုင်းအစ လေးတွေ မှတ်တမ်းဝင်သွားတာပေါ့။
”ဆင့်ချ စွေသွန် ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အသံယူပုံမှာ
မျောသွားတယ်. . .
ကျနော့် ဘဝမှာလည်း ဘုရင်တွေ မနည်းခဲ့ဘူးကိုးးးးး
အခု လော လော ဆယ်လက် ထဲ မှာ ဦး ပုည ပေါင်း ချုပ် တစ်အုပ် ရ ထား ပါတယ်။
ကူး ရေး ပြီး တင် ပြ ဘို့ ကြံ စည် နေ ပါ တယ်။